Home Wararka Faahfaahin dheeri oo kasoo baxaysa dil ka dhacay Magalada Gaalkacyo
Faahfaahin dheeri oo kasoo baxaysa dil ka dhacay Magalada Gaalkacyo
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya nin Ganacsade ahaa oo barqanimadii Maanta lagu dilay xaafad ka tirsan Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug dhinaca Maamulka Galmudug.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in dilka loo geystay ganacsadaha uu sigaar ah uga dhacay halka loo yaqaano Buulo bacleey ee xaafadda Horseed ee Gaalkacyo, waxaana Ninkaas toogtay rag hubeysan.
Dad yaqaanay ayaa magaca Ninka la dilay kusoo gaabiyay Bidaar, waxaana uu u geeriyooday rasaas looga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa, iyadoona goobta ka baxsadeen ragii ka dambeeyay falkaas.
Warar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dilka loo geystay Ninkaas uu yahay mid la xiriiray aano beeleed, isla markaana goobta uu falku ka dhacay tegay qaar kamid ah Ehelada Marxuumka oo qaaday Meydka.
Marxuumka oo deegaan ahaan kasoo jeeda deegaanka Tawfiiq ee Gobalka Mudug ayaa la sheegay in wiil uu dhalay uu horey u dilay nin kasoo jeeda Koonfurta Gaalkacyo oo lagu Magacaabi jiray Tuurcad, waxaan falalkaas ay ahaayeen kuwo la xiriiray aano qabiil.